Nooca: Maajo 5, 2021
Waqtiyada tallaalada COVID-19
Boos celinta oonleenka
Wakhtiga tallaalka COVID-19 ee Tirol
Waxay ku xirantahay tallaalka, tallaalka labaad wuxuu ka dhacayaa
BioNTech/Pfizer shan toddobaad,
Moderna shan toddobaad iyo
AstraZeneca kow iyo toban ilaa laba iyo toban toddobaad.
Janssen, hal talaal oo keliya ayaa ku filan.
Boos celintu waxay wali suurtagal ku ah www.tirolimpft.at suurtagal.
Ogeysiis: Wakhtiyada tallaalku waxay kuxiran yihiin qoondeynta tallaalka ee Dawladda Federaalka. Sahayda tallaalka ayaa wali xadidan. The Federal Ministry of Health (Wasaaradda Caafimaadka ee Federaalka) waxay si joogto ah u cusbooneysiisaa tilmaamaheeda ku saabsan goorta la tallalo kooxaha dadka. Wakhtiga dhabta ah ee talaalka wuu ka duwanaan karaa liistiga soo socota.
Tallaalada hada socda
Guryaha xanaanada waayeellada iyo guryaha daryeelka: oo dhammaystiran
Shaqaalaha Xarumaha Covid: oo dhammaystiran
Shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee isbitaalada: oo dhammaystiran
Dhakhaatiirta takhasuska leh iyo dhakhaatiirta ilkaha iyo shaqaalahooda: oo dhammaystiran
Dadka da'doodu ka weyn tahay 80 sano - kuurada ugu horreysa dhammaan degmooyinka Tyrolean: oo dhammaystiran
Sii wadista iyo dhammaystirka wajiga 1-aad
Shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa daryeelka caafimaadka (gaar ahaan, shaqaalaha adeegga gurmadka, dadka aan ku takhasuusin daryeelka caafimaadka iyo daaweynta, shaqaalaha bulshada iyo shaqaalaha taageerada naafada)
Dadka haysta shaqo joogto ah ama joogitaan joogto ah/joogitaan dheer ah ee guryaha xanaanada waayeellada, guryaha daryeelka iyo tas-hiilaadka guriga oo dhammaystiran
Dadka qaba xaalado horay u jiray iyo kuwa si gaar ah ugu jira khatar sare (iyadoon loo eegayn da'da) gudaha hay'adaha iyo daryeelayaashooda
Dadka naafada ah ee ku jira xarumaha daryeelka
Dadka daryeela qaraabada naafada ah
Wajigan waxaa sidoo kale si weyn loo dhammaystiray.
Wajiga 2aad – Maarso/Abriil
Dadka da'doodu ka weyn tahay 65 sano iyadoo loo kala horeeyo da'da iyo (gaar ahaan sare ama kuwa ka sareeya) khataraha caafimaad
Dadka leh (gaar ahaan sare ama kuwa ka sareeya) khataraha caafimaad
Dadka ku jira daryeelka 24 saacadood iyo daryeelayaashooda
Xiriirada dhow ee haweenka uurka leh
Shaqaalaha dugsiyada iyo xanaanooyinka iyo xarumaha daryeelka caruurta iyo dhalinyaradda (macluumaad ku saabsan loo shaqeeyaha ama xarunta)
Wajiga 3aad – Maajo/Juun
Shaqaalaha ku jira jagooyinka muhiimka ah iyo kaabayaasha muhiimka ama aasaasiga ah
Dadka da'doodu ka yar tahay 65 sano sida loogu kala horeeyo
Wajigan mar hore ayay bilaabantay.
Diiwaangelintu waa mid aan khasab ahayn. Waqtigaan la joogo, talaalada wali waxaa lagu heli karaa tiro xadidan, waana sababtaas sababta talaalada loogu qaadayo si waafaqsan jadwalka talaalka Tyrolean. Da 'gaar ah iyo kooxaha shaqada ayaa mudnaanta la siinayaa.
Isla marka tallaallo loo helo koox kasta oo ka mid ah, dadka horay u diiwaangashan ayaa heli doona macluumaad dheeraad ah. Waqtiga boos celinta la sameynayo saameyn kuma yeelanayo booska qofka ee safka. Nidaamka safku wuxuu ku saleysan yahay Jadwalka tallaalkaTyrolean iyo wejiyada lagu sharraxay gudaheeda.
Boos celin aan qasab ahayn ayaa loogu talagalay dadweynaha guud
Nidaamka boos celinta waa sidan soo socota
Fadlan ogow in diiwaangelinta oonleenka ah lagu taliyo xaalad kasta. Fadlan taageer kuwa
aan taas sameyn karin naftooda. Xaaladaha gaarka ah, boos celin ayaa sidoo kale lagu sameyn karaa iyadoo la wacaayo
qadka taleefanka caafimaadka 1450. Haddii aadan isticmaalin internetka ama aad u baahan tahay caawimaad sameynta boos celin, fadlan weydiiso qaraabo ama qof aad ku kalsoon tahay inuu kula galiyo xogta.
Wac websaytka boos celinta (www.tirolimpft.at). Websaytkan waxaa kaliya lagu heli karaa luuqada Jarmalka.
Muuji inaad adigu naftaada qabsanayso ama qof kale.
Gali faahfaahintaada shaqsiyeed. Faahfaahintaan waxaa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo aqoonsigaaga.
Intaas waxaa sii dheer, halkan ku qor lambarkaaga caymiska qaranka Austrian halkan iyo, haddii ay khuseyso, ku xirnaantaada koox shaqaale ah. Haddii aadan haysan lambarka amniga bulshada Austria, fadlan sharax sababta.
Gali faahfaahinta xiriirkaaga. Xogtaan waa lama huraan sidaa darteed waxaan kugula socodsiin karnaa waqti ku saabsan helitaanka talaalada iyo sida loo sii wado.
Xulo goobta tallaalka aad doorbideyso (dhaqanka dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ama xarunta tallaalka)
Bixi macluumaad kasta oo kale oo la xiriira tallaalka COVID-19 (sida xaaladaha horay u jiray).
Hada adaa isasiidiwaangaliyay.
Diiwaangelinta hore ka dib, dadka oo dhan waxay ku heli doonaan macluumaad dheeraad ah waqtiga ku habboon iyada oo loo marayo faahfaahinta xiriirka ee la bixiyay (SMS ama ii-mayl) isla marka tallaallada la helo da'da u dhiganta ama kooxda shaqada.
Xagee laiga talaali karaa?
Booqo www.tirolimpft.atsi loogu daro magacaaga liiska sugitaanka ee tallaalka dhakhtarka deegaanka ama xarunta tallaalka. Waxaad ku heli doontaa casuumaad ballan si laguugu soo diro SMS ama iimayl waqtigeeda ku habboon. Haddii aad dooratid in lagaa tallaalo dhakhtar maxalli ah, rugta caafimaad ayaa kula soo xiriiri doonta.
Madasha diiwaangelinta www.tirolimpft.atwaxaa lagu heli karaa oo keliya luuqada Jarmalka. Ma fahmin waxa ku qoran. Maxaa samayn karaa?
Waxaad weydiin kartaa qof ku hadla Jarmalka inuu kaga buuxiyo foomka diiwaangelinta halkan www.tirolimpft.at ama, xaalado gaar ah, adigoo wacaya 1450.
Maxaan ubaahanahay inaan sameeyo si aan isdiiwaangaliyo?
Balamaha tallaalka labaad ee Covid-19 waa mid waajib ku ah
Martiqaadka ballanta tallaalka had iyo jeer waxaa kujira taariikhda tallaalka koowaad iyo kan labaad ee tallaallada u baahan laba tallaal (BioNTech/Pfizer, Moderna iyo AstraZeneca). Haddii aad xaqiijiso martiqaadka, waad aqbali labada ballan. Balamaha waa waajib. Haddii aadan iman karin maalinta koowaad ama labaad, waa inaad diiddaa labada ballamo. Waad ku sii jiri doontaa nidaamka ka dib markaad diido ballamada laguu qabtay. Inta lagu jiro wareegga ballanta xiga, waxaa lagu siin doonaa laba ballamo kale. Mar labaad, hubi inaad horay u sii hubisay inaad awoodi doontid inaad ka qaybgasho labadaba.
Tallaalka shirkadda Janssen waxay u baahan tahay keliya hal tallaal. Xaaladdan oo kale waxaad ku heli doontaa hal ballan oo keliya e-mayl ama farriin gaagaaban.
Bixi taariikhda bogsashadaada ka dib infakshanka Covid – casumaad otomaatig ah ballanta tallaalka ugu yaraan lix bilood ka dib.
Haddii uu kugu dhacay cudurka Covid-19 lixdii ilaa sideedii bilood ee la soo dhaafay oo aadna heyso caddeyn ka soo kabsashadaada, waxaad ku qori kartaa macluumaadkaan boggaaga shakhsi ahaaneed ee 'Tyrol gets vaccinated'. Sheeg maalinta ugu dambeysa ee is-karantiilinta sida ku qoran shahaadadaada ka socota maamulka caafimaadka. Waxaad heli doontaa casuumaad ballanta tallaalka ugu yaraan lix bilood ka dib taariikhda bogsashadaada. Dadka ka bogsaday Covid-19 kaliya waxaa la siiyaa hal qadar oo ah tallaal kasta oo laba-tallaal ah.
Cusbooneysii xogtaada shaqsiyeed
Haddii aad ku soo gashay liiska sugitaanka ee tallaalka Covid-19 ee loo maro 'Tyrol gets vaccinated' laakiin waxaad ka heshay tallaalkaaga meel kale inta u dhexeysa (tusaale ahaan, shaqaale cisbitaal ahaan), fadlan masax xogtaada. Adoo ku sii jiraya nidaamka inkasta oo aad meel kale oo tallaal ah ku dhammaysatay, waxaad joojin lahayd ballanta qof kale oo sugaya.
Weydiiso xiriirka marinka "shaqsiyeed boggaaga" markale
Miyaad si kama 'ah u tirtirtay ama u lumisay iimaylkii ku xirnaa xiriirka boggaaga gaarka ah? Waad codsan kartaa xiriiriye markale:
Xulo Xulo lifaaqa ‘Persönliche Seite’
Xullo ‘Über E-Mail anfordern’ si aad ugu hesho xiriirinta iimayl ama ‘Über SMS anfordern’ si aad ugu hesho fariin qoraal ah
www.tirolimpft.at - reminder and confirmation system
Haddii aad ku jirto liiska sugitaanka, waxaad heli doontaa ballanta tallaalka adiga oo u diraya fariin qoraal ah ama iimayl. Waxaad sidoo kale heli doontaa xusuusin si loo xaqiijiyo ama loo diido ballamaha 24 saac ka dib markaad hesho iimaylka ama farriinta qoraalka. Haddii aadan jawaab kaga bixin 48 saacadood gudahood, ballanta waxaa loo tixgelin doonaa diidmo. Si toos ah ayaa lagugu gelin doonaa liiska sugitaanka waxaana lagaa helayaa ballamo cusub wareega xiga. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda haddii aad diiddo ballanta.
Intii lagu gudajiray abaabulkii dheeraa ee ‘Tyrol gets vaccinated’, shaqooyin dheeri ah ayaa lagu daray liiska. Waxaad u adeegsan kartaa boggaaga xogta shakhsi ahaaneed si aad wax uga beddesho haddii mid ka mid ah shaqooyinka cusubi uu si sax ah u sharraxayo xaaladdaada. Isla bogga, waxaad sidoo kale ku qeexi kartaa inaad xiriir dhow la leedahay haween uur leh ama daryeele ama qaraabo dhow oo shaqsi khatar ku jira.
Ma ka saari karaa naftayda liiska sugitaanka?
Haa. Waxaad u isticmaali kartaa boggaaga xogta shakhsiga ah inaad iska saarto liiska sugitaanka. Haddii aad rabto inaad dib isugu soo qorto liiska, waxaad u baahan doontaa inaad mar labaad buuxiso foomka diiwaangelinta.
Yaa laga tallaali karaa COVID-19 ee Tirol?
Guud ahaan, dadka deganaanshaha rasmiga ah ku leh magaalada Tyrol (oo leh lambarka soshal sekuuriyada Austria) waxaa laga tallaali karaa coronavirus-ka da'da 16 ama 18, taas oo kuxiran tallaalka. Waa in la ogaadaa in helitaanka tallaalada oo aad u yar awgood, loo siinayo sida ay u kala mudan yihiin.
Caruurta iyo dhalinyarada kayar 16/18 sano, oo aan hada talaalka ruqsad loo siinin, waa inaan la talaalin. Maaddaama aan weli la helin caddayn ku filan, haweenka uurka leh ama naas nuujinaya waa in hadda la tallaalaa oo keliya ka dib qiimeyn-shaqsi qiimayn. Qof kasta oo la ildaran cudur ba'an oo leh qandho ka sarreysa 38.5°C waa inaan la tallaalin illaa ay ka bogsadaan. Si kastaba ha noqotee, qabow ama heerkul yar oo sarreeya (ka hooseeya 38.5°C) maaha sabab dib loogu dhigo tallaalka. Waa inaan lagaa tallaalin haddii aad xasaasiyad u leedahay qayb kasta oo ka mid ah tallaalka. Fadlan ogeysii tallaalka kahor tallaalka haddii aad xasaasiyad leedahay. Dadka horey loo soo arkay inay qabaan cudurka cusub ee coronavirus isla markaana caafimaad ahaan caafimaad qaba uma baahna in marka hore la tallaalo, laakiin ma jiraan wax laga sheegayo tallaalka. Tijaabooyinka antibody, baaritaanka antigen, ama baaritaanka PCR looma baahna tallaalka ka hor. (Xigasho: Wasaaradda Arimaha Bulshada ee Austria)
Immisa qiyaasood ayaa loo baahan yahay si looga hortago?
Talaalka ugu horeeya ee shuruud la’aan lagu ansixiyay waa kan ka imanaya BioNTech/Pfizer. Laba qaadasho oo tallaalka ah waa in la qaataa. Tallaalka 2aad waxaa lagula talinayaa shan toddobaad kadib tallaalka ugu horreeya.
Talaalka labaad waa kan Moderna. Talaalkan sidoo kale waa in lagu qaataa laba qiyaasood. Mar labaad, waxaa lagugula talinayaa inaad hesho tallaalka labaad usbuuca lixaad ee kan koowaad.
Tallaalada AstraZeneca waxaa la isku siiyaa 11-12 toddobaad.
Tallaalka Janssen, kaliya hal tallaal ayaa loo baahan yahay.
Waxaan horey u qabay COVID-19 waqtigii la soo dhaafay. Miyaa lay tallaalayaa?
Miyaad horeyba kugu dhacay infekshinka Covid lixdii ilaa sideedii bilood ee ugu dambeysay ee lagu xaqiijiyay baaritaanka PCR? Sababtoo ah infekshankaaga Covid, jirkaaga ayaa sida caadiga ah horeyba u soo saaray unugyada difaaca jirka oo ku filan sidaasna waa loo ilaaliyaa. Natiijo ahaan, hadda uma baahnid tallaal loo yaqaan tallaalka Covid iyadoo loo eegayo talooyinka ugu badan ee hadda jira ee Guddiga Talaalka Qaranka. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan doontaa mid qiyaastii lix illaa siddeed bilood ka dib infakshinka Covid. Sidoo kale, infekshinkaagii hore awgiis, hal tallaal ayaa kugu filan, marka waxaad heli doontaa hal taariikh oo tallaal ah (oo aan laba ahayn) oo loogu talagalay tallaallada sida caadiga ah ee laba-tallaal ah (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca).
Miyaad haysay infekshinka Covid ee lagu xaqiijiyey baaritaanka PCR ka dib tallaal qayb ahaan ugu horreeyey ah? Xaaladdan oo kale, hadda uma baahnid tallaal qayb ahaan labaad ah oo sida caadiga ah aad ku qaadanayso tallaal laba-tallaal ah (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca) inta lagu jiro muddada sida caadiga ah loo qorsheeyay inta u dhexeysa labada tallaal. Badalkeed waa inaad heshaa hal 6-8 bilood kadib cudurka. Tallaalka hore iyo jirada ku xigta awgood, jirkaaga ayaa sida caadiga ah horeyba u sameystay unugyada difaaca jirka oo ku filan sidaasna lagu ilaaliyo.
Si aad u ogaatid cudurkaagii hore ee Covid ee ku saabsan isku qoritaankaaga: hubi "Haa, horeyba waan u soo qaatay Covid-19". Kadib fadlan gali maalinta ugu dambeysa ee karantiinka adiga oo isticmaalaya qaabka dd.mm.yyyy. Fadlan u isticmaal maalinta ugu dambeysa ee karantiil ujeedadaas. Taariikhdan waxaa laga heli karaa ogeysiiskaaga waaxda caafimaadka.